Mandrehitra Adihevitra ao Aostralia ny Fiantsoana Hetra Ho an’ny Siramamy Amin’ny Fanjakan’i Nanny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2016 16:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 日本語, English
Tatitra momba ny Hetran'ny Siramamy -Sary avy amin'ny Ivontoerana Grattab (CC BY-NC-SA 3.0)
Miady an-trano mikasika ny sosokevitra iray nataon'ny Ivontoeran'i Grattan mba hampiakarana hetran-tsiramamy amin'ny zava-pisotro mba hiadiana amin'ny hatavezana tafahoatra. Namoaka tatitra iray ilay vondrona fakàn-kevitra tsy miankina,’ Hetranà siramamy amin'ny zava-pisotro – Handrakofana ny sandan'ny hatavezana eny anatin'ny ffiarahamonina’, tamin'ny fanolorana hoe:
Tokony mampiditra hetra amin'ny zava-pisotro mamy i Aostralia mba hakàna ny ampahany amin'ny sandan'ny hatavezana tafahoatra avy amin'ny fiarahamonina.
Ny safidy tsara indrindra dia fametrahana hetra 40 cents isaky ny 100 graman-tsiramamy, amin'ireo rehetra tsy misy alikaola, zava-pisotro vita amin'ny rano izay ahitana siramamy fanampiny.
Tonga dia nandà avy hatrany ilay hevitra ny Lefitry ny Praiminisitra, Barnaby Joyce, nantsoiny ho ”adala marary saina” – fomba fiteny zavatra tokana lazaina aminà teny roa samihafa na miteny zavatra iray averina in-droa, satria ny hoe adala dia midika marary saina. Tsy nahafaly an'ilay mpanoro hevitra ara-tsakafo Miranda Blake io:
@BarnabyJoyceLNP govt tried ‘stop eating so much’ approach for decades. Result? World leading obesity #sugartaxhttps://t.co/i7Eyc3UkvG
— Miranda Blake (@MirandaRBlake) 23 Novambra 2016
niezaka ny fanambatambazana ‘atsaharo ny mihinana be loatra’ ampolotaona maro ny governemanta @BarnabyJoyceLNP. Vokany? Lohalaharana amin'ny hatavezana erantany #hetran-tsiramamy
Mpikambana ao amin'ny parlemanta ho an'ny Nasionaly, antoko manana fifandraisana akaiky amin'ny sehatry ny fambolena i Joyce.
Mba hampiasana teny fanoharana amin'ny baolina kitra, ny sasany ao amin'ny haino aman-jery dia tokony ho voampanga ho ‘milalao ny olona fa tsy ny baolina” (famelezana manokana):
“Is it too early to predict Barnaby's Push Back Weight Loss Program will become a viral worldwide hit?” https://t.co/WISfQx8Mnb #sugartax
— Dan Gaffney (@DTGaffney) 23 Novambra 2016
‘Mbola aloha loatra ve izao raha haminany fa mety ho lasa zavatra miely be eran-tany ny Fandaharana Famporisihana Fampihenan-tavy an'i Barnaby?” #hetran-tsiramamy
Nisy ireo fiampangana fihatsarambelatsihy tsy afaka nialana mikasika ny hetra avo amin'ny toaka sy sigara amam-paraky. Ho famaliana ny bitsik'i Joyce izay niteny fa ”tsy hamaha ny olana ara-tavinao” ny Birao Aostraliana misahana ny Hetra, hoy i Christian Peterson nanohitra:
But apparently it'll solve ya booze and nicotine use issues. There's a reason hypocrite and politician are a cliche in our culture.#sugartax https://t.co/H2fc2Z4v4J
— Christian Peterson (@API80) 23 Novambra 2016
Fa raha ny hita dia hamaha ny olan'ny fampiasànao ny toaka sy nikôtinina izany. Misy antony mihatsara velatsihy ary ny politisiana dia sary miiba eo amin'ny kolontsaintsika. #hetran-tsiramamy
Fahavalony taloha no lasibatr'i Adam Cleave, izay miara-miasa anatina raharaham-bondron'orinasa ho an'ny Imperial Tobacco :
Budget balance could be helped by reducing the number of tax-funded lobby groups that exist purely to ban things they don't like. #sugartax https://t.co/i3epJgONC0
— Adam Cleave (@AdamCleave) 23 Novambra 2016
Mety ho voavonjy ny fifandanjan'ny tetibola, amin'ny fampifandanjàna ny isan'ny vondron'olona vidiana vola hanao tsindry momba ny hetra, vondrona izay tena misy tokoa mba handraràna ny zavatra tsy tian-dry zareo #hetran-tsiramamy
Nampifandraisin'i Aaron Lane tamin'ny fikarohany ho an'ny vondrona fakàn-kevitry ny tsena malalaka ‘Ny Ivontoeran'ny Raharaham-bahoaka (@TheIPA)”, mpanohana nentim-paharazana ny governemanta bitika sy ireo mpanohitra ilay fanjakana antsoina hoe ‘fanjakan'i nanny':
Sugar tax is already on the list of bad ideas that don't work. My @TheIPA research from 2014: https://t.co/DVPcuBBLBo #ausvotes #nannystate
— Aaron Lane (@AMLane_au) 21 Jona 2016
Efa ao amin'ny lisitr'ireo hevitra ratsy sahady, izay tsy mandeha, ny hetran-tsiramamy. Ny fikarohana @TheIPA tamin'ny 2014: #ausvotes #fanjakan'inanny
Maro tamin'ireo mpampiasa Twitter no niahiahy mikasika ny antony nanosika tao ambadik'ilay sosokevitra:
#sugartax is just like #carbontax Scam to get more money out of the population.
— Marcell (@melvict) 23 Novambra 2016
Toy ny fisolokiana #hetraKArbona mba hahazoana vola bebe kokoa avy amin'ny vahoaka ny #hetran-tsiramamy
Ny hafa toa an'i Caitlin Syrett dia nandà ny hevitra mampiditra ny andraikitry ny tsirairay:
.@Barnaby_Joyce: “I believe in the freedom of the individual.”
Statistics: “Look where that's got us”. #auspol #sugartax pic.twitter.com/JWKXuWas20
— Caitlin Syrett (@CaitlinSyrett) 24 Novambra 2016
@Barnaby_Joyce: ”Mino ny fahalalahan'ny tsirairay aho.”
Antontan'isa:”Jereo ny toerana nitondran'izany antsika”. #auspol #hetran-tsiramamy
Ny nify no tao an-tsain'i Matthew Hopcraft, manam-pahaizana amin'ny fahasalama'ny nify, araka ny mety ho nantenainao :
I hear a lot of opposition to a #sugartax as one part of the fight against #obesity #decay #diabetes
But I don't hear credible alternatives https://t.co/KOlJiPxO73
— Matthew Hopcraft (@Matt_Hopcraft) 23 Novambra 2016
Maheno fanoherana maro aho mikasika ny #hetran-tsiramamy ho toy ny ampahany amin'ny ady amin'ny #hatavezana tafahoatra #diabeta
Fa tsy maheno fomba azo antoka azo atao safidy
Nanana jery matanjaka mikasika ilay hetra ilay mpamoaka lahatsoratra ara-toekarena ho an'ny gazety an-tsoratra Sydney Morning Herald:
Talk of ‘nanny state’ is cover for protecting profits of industries selling health-damaging products https://t.co/Mfifkfcz50 #ausecon
— Ross Gittins (@1RossGittins) 23 Novambra 2016
Fanarontsaronana hiarovana ny tombontsoan'ireo orinasa mivarotra zavatra manimba ny fahasalamana ny firesahana ny ‘fanjakan'i nanny’ #ausecon
Mandritra izay fotoana izay, efa nisaina zavatra hafa ny sasany:
Rather than considering a sugar tax, it'd be more useful if there was a fresh fruit and veg subsidy for low income earners and pensioners
— Asher Wolf (@Asher_Wolf) 23 Novambra 2016
Raha hihevitra hetran-tsiramamy ihany, mety hahasoa kokoa raha nisy famatsiana voankazo sy legioma vaovao ho an'ny olona kely fidiram-bola sy ireo mpisotro ronono
Noho izany, inona avy ary no tena vola lany amin'ny krizin'ny tavy tafahoatra, ary ahoana no hitondràn'ny hetran-tsiramamy fahasamihafàna?
Tao anatin'ity podcast ity, ny mpiara-manoratra ny tatitra, Stephen Duckett, dia niresaka ilay olana. Misy fahazoandàlana lisansa Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) izany: